Tani dhab ahaantii waxay ku kacaysaa sameynta iPhone 11 Pro Max | Wararka IPhone
Waxaan ku bilaabaynaa faallooyinka sanad kasta ee ku saabsan qaabka hadda ay soo saartay shirkadda Cupertino, waana taas in uu jiro aaminaad, taas oo run u noqon karta heer sare ama ka yar, in Apple ay ku soo rogto qiime alaabteeda oo aan u dhigmin gabi ahaanba leh maalgashiga la sameeyay, ama inbadan ayaa qeexaysa: "Xad dhaaf ah." Warbixinta sanadkan ee ku saabsan sida dhabta ah ee ay ugu kacayso shirkadda Tim Cook inay sameyso cutub kasta oo ka mid ah iPhone 11 Pro Max ee qiimaha leh ayaa durba soo ifbaxay.
Ma rabtaa inaad ogaato inta ay dhab ahaantii ku kacayso sameynta iPhone 11 Pro Max? Waxaa laga yaabaa inay "ka jaban tahay" inta aad qiyaasi karto.
Qaabka 6,5-inji ah ee loo arko inuu yahay midka ugu sarreeya ee shirkadda Cupertino ayaa ku kacaya qiyaastii $ 490 (qiyaastii € 450 in la beddelo) Iyada oo dhammaan qeybaheeda, tani waa burburka qiimaha qaar ka mid ah kuwan:
Shaashadda: 66,50 Dollar.
Battery: 10,50 Dollar.
Set of kaamirooyinka: 73,50 Dollar.
Processor, xusuusta iyo chipset: $ 159.
Naso qiimaha yar iyo fiilooyinka: 181 dollars.
Mar labaad muranka ayaa loo adeegsaday, warbixintan waxaa sameeyay TechInsights oo dhexdeeda qiimaha mid kasta oo ka mid ah qaybahaani waa mid faahfaahsan oo la caddeeyey. Si kastaba ha noqotee, waa inaan maskaxda ku haynaa in qiimaha ku dhowaad 450 euro ee aan halkaan ku soo aragnay, qiimaha dheeriga ah ee barnaamijka Apple ee matalaya alaabtiisa aan lagu darin, iyo sidoo kale maalgashiga weyn ee cilmi baarista iyo horumarinta ee keenay Cupertino shirkad booska meesha ay maanta joogto, sidaas darteed, Haddii seedigaagu kuu ogolaado inaad ka qayb gasho cashada qoyska: "Iphone-ka waa dhac, qiimihiisuna waa 450 euro si loo soo saaro waxayna ku iibiyaan in ka badan 1.000" Xusuusi inaad adiguba bixiso naqshadeeyayaasha qalabka, naqshadeeyayaasha qalabka, barnaamijyada macruufka ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Tani dhab ahaantii waxay ku kacaysaa sameynta iPhone 11 Pro Max
Kharashka suuqgeynta, mushaaraadka tafaariiqda, kharashka R&D (sida looga hadlay maqaalka), dulsaarka faa iidada ... kuma jiraan.
WAA XATOOYADA DHABTA ah sida ay ugu sarrayso taleefankaasi.
laga bilaabo 450 euro ilaa 1000 euro waxaa jira farqi u dhexeeya 550 euro. Iyo inaad ku darto kharashyada barnaamijka, wax yarna, mamandurria ayaa caymis leh. Uma isticmaalo sumaddaas, ma jecli, laakiin waxaan haystaa caqli Huawei p30 oo aan waxba ka hinaasayn xannibaaddaas. Waxayna ku kacaysaa in ka yar kala bar.
Ku jawaab salvatore
Haddii aadan u adeegsan sumadda si ay kuu siiso fikrado doqon ah, ku sii farax adigoo ku hadlaya taleefankaaga Shiinaha oo aad uga faa'iideysanayso 2-da sano ee nolosha ee ay siineyso cusbooneysiin ...
Qiimaha ay bixiyaan waa jajabyada, waxay noqon laheyd lagama maarmaan in la ogaado shaqada golaha, baakadaha, rarka, royalties ay tahay inay bixiyaan, marka lagu daro wixii ay horeyba u yiraahdeen ee dulsaarka faa iidada iyo wax kale oo hubaal waan tagnay.
Waxaan ka shaqeeyay iibinta alaabta guriga iyo sameynta fadeexado si aan u helo qiimaha wax kasta oo gabal alaab ahi xanbaarsan yahay, laga soo bilaabo furka ugu yar ilaa kan ugu weyn mana qiyaasi kartid xaddiga waxyaabaha ay tahay in lagu xisaabtamo si marka aad qiimo hesho iibinta dadweynaha lacag ha ku waayin adigoo aan wax ku darin.
Hadda waxay noqon laheyd lagama maarmaan in la ogaado qiimaha ay ku kacayso soo saarista Huawei P30, wali waad la yaabaysaa waxayna ku kacaysaa € 150, markaa miyay sidoo kale ku dhacayaan? mise isku mid ma noqonayso?
Waxaan hayaa Huawei P30 Pro.
Runtu waa daahir xun oo boggan ah si loo tuuro tufaax.
Waxaa jira taleefannada gacanta oo qiimahoodu ku dhowyahay sida iPhone-ka mana loo arki karo inay ka cabanayaan qiimaha, waxaan ahaa 3 sano anigoo isticmaalaya taleefannada gacanta sida Samsung, Huawei dhammaantoodna waxay leeyihiin dhibaato batteri oo isku mid ah iyo isku-dheelitirnaan xumo nidaamka ah in taleefannada gacanta ee aan isticmaalo ay yihiin kuwo heer sare ah. Ilaa aan ka iibsado iPhone xs taleefan gacmeed qabow, wax dhibaato ah oo batari ah kama qabin, waan isticmaalay maalintii oo dhan, samaacadaha dhagaha ayaa si xarig la aan ah u leh tayada fiidiyowyada taxanaha ah oo haddii aysan intaas igu filneyn, waxaan iibsaday iPhone-ka cusub 11 jeer kun jeer. marka loo eego kii hore, oo leh xeedho turbo ah in 1 saac sawiradayda taleefanka gacanta ee hababka habeenka 4k iyo in ka badan aanan waligey ka badali doonin dadka Android ee u maleeya waxa camtrario ay tahay maxaa yeelay waligood iphone kuma helin sida ay miskiin u tahayna waligood ma iibsan karo oo ka doorbido inaad ka hinaaso hahaha miskiin yar oo aan lacag haysan haha
Ku jawaab Luisferrariny
Taasi waa inta ay le'eg tahay qaybaha si gooni gooni ah, laakiin maahan waxa Apple ay bixiso mid kasta.